Ogaden News Agency (ONA) – OYSU Switzerland oo shirkii Midowga Dhalinyarada Afrika uga xogwaramay xaaladda dhalinyarada iyo ardayda Ogadenya
OYSU Switzerland oo shirkii Midowga Dhalinyarada Afrika uga xogwaramay xaaladda dhalinyarada iyo ardayda Ogadenya
Waxaa Sabtidii 3da March 2012 lagu qabtay caasimadda wadanka Switzerland ee Bern shir muhim ah oo ay soo qaban qaabiyeen Ururka Midowga Dhalinyarada Africa. Shirkaas oo looga hadalayay arimaha amniga iyo xaquuqul insanka iyo isdhexgalka qaaradda africa.waxaana shirka kasoo qeybgalay dublumaasiyiin iyo haya’do caaalami ah.
Shirka ayaa waxaa lagu macsuumay oo ka qeyb galay wafti ka socda Ururka Dhalinyarada iyo Ardeyda Ogadeyna (OYSU) faraca Switzerland oo uu hogaminayay xoghayaha faraca OYSU Switzerland mudane Maxamed Ibraahim, Sharmaarke Cabdi Xaji xogheynta ururka iyo Caafi Muxumed xogheynta warfaafinta ee OYSU Switzerland.
Wafdiga OYSU switzerland shirka waxay ka jeediyeen warbixin guud oo ka waramaysa xaaladda wadanka Ogadenya guud ahaan iyo tacaddiyada kajira, waxayna diirada saareen dhibaatada lagu hayo dhalinyarada iyo ardeyda Ogadenya ee sida arxandarrada ah iyo bahalnimda ee aan waafaqsanayn shuruucda caamaliga iyo kuwa AfriKaba ay kula kacaan taliska gumeysiga iyagagoo ku qasba iney ciidan u noqdaan, uguna shaqeeyaan si khasab ah haddii kale ay mutaysanayaan ciqaab dil iyo xadhig isugu jirta. Waxay ku soo bandhigeen madasha shirka warbixin ka kooban maqal iyo muuqaal aad u soo jiitay shucuurta wufuudda shirka ka soo qaybgalay.
Dhinaca kale OYSU switzerland waxay shirweynaha u sheegeen iney taageersanyihiin midnimda iyo wada jirka Africa, iyo inuusan dal Afrikaan ah wadan kale oo Afrikaan ah gumaysan, lagana gudbay hadda xiligii is-adoonsiga. Waxay goobta ka cadeeyeen inuu wadanka ogadeniya madax bananidiisa helo xaq u leeyahay iyo aayo ka-tashigiisa sida Koofurta Suudaan, kadibna kubiiro Midowga AfriKa. Waxay u sheegeen wufuuda inay dalalka Afrika xilligan ay waajib ku tahay iney dhiiri gelinliyaan madaxbanaanida shacabka Ogadenya.
Wafdigii ka socday OYSU switzerland ayaa kulama gooni gooni ah la qaatay ergada shirka saaxiibo badanna qaddiydda u kasbay una qeybisay ergooyinka qoraalo.taatiikhda iyo xaaladda ogadeynya ku saabsan.
shirka ayaa xalay ku soo gabagaboobay jawi wanaagsan iyo farxad iyo wada shaqeyn joogta ah inay yeeshaan dhalinayarada Afrika.